Hulu vs Sling TV - Iza amin'ireo serivisy mivantana no tsara indrindra? - Tapakila
Ny fanapahana ny tadiny dia lasa fenitra vaovao ho an'ny olona manerantany. Amin'ny teny tsotra, ny zavatra rehetra dia miova avy any Cable na TV Satelita amin'ny fampiharana mivantana malaza. Ireo rindranasa mivantana ireo dia mampiasa Internet mba hitondranao fialamboly tsy tapaka. Ny ankamaroan'ireo fampiharana ireo dia manana safidy video-on-demand.
Na izany aza, ireto fampiharana mivantana aza mifanaraka amin'ny antso tena marina an'ny Live TV. Na manao ahoana na manao ahoana ny bika aman'endrikao, misy olona tsy mahita ny tsy fahaizan'ny Live TV sy ny fantsona maro be. Ho an'ny olona izay tsy afaka manapa-kevitra ny amin'izay hijerena na hikatsahana fialamboly ambadika, Live TV no fomba fialamboly tsara indrindra.
Amin'ity spectrum ity dia mbola misy goavambe roa mifampikambana amin'ny tandroka. Marina izany! Hulu sy Sling TV dia sehatra roa lehibe ahafahanao manana traikefa amin'ny fahitalavitra mivantana. Amin'ity famerenana ity dia hampitahantsika ny Hulu sy ny Sling TV.
Hulu vs Sling TV - Fifanarahana
Ny fampifanarahan'ny sehatra dia mifandraika amin'ireo fitaovana misy azy ireo. Ny Sling TV sy ny Hulu dia fampiharana voalohany hita amin'ny iOS, Android, sy ny rafitra miasa hafa. Izay Smart TV dia afaka misintona sy manangana azy ireo ho anao.
Na i Roku, Firestick, ary mpamatsy serivisy streaming hafa aza dia manome anao fotoana malalaka amin'ny fampiasana ireo fampiharana ireo. Ankoatr'izay, azonao atao ny mampiasa azy ireo amin'ny console lalao, koa. Hulu dia misy fisie tsara kokoa amin'ny console lalao satria misy amin'ny Nintendo Switch. Ny Sling TV dia tsy misy amin'ny sehatra Sony. Mandritra izany fotoana izany, Hulu dia miavaka ary mitondra anao Hulu + Live TV ho an'ny sehatra Sony.
Amin'ny ankapobeny, manana elanelam-potoana mifanentana tsara kokoa amin'ny Hulu ianao noho ny Sling TV. Na izany aza, raha ny momba ireo fitaovana fampiasa matetika, ny Sling TV dia mijanona amin'ny toerana azo iainana ihany.
Na dia miankina amin'ny karazana fisoratana anarana azonao aza, ny isan'ny efijery dia karazana fampifanarahana. Zava-dehibe ny hianaranao ny isan'ny fanapahan-kevitra azonao ampiasaina miaraka amin'ny stream avy amin'ny app. Ny famandrihana Sling TV's Orange dia mamela ny streaming amin'ny efijery tokana, ary ny fonosana fisoratana anarana Blue dia mamela efijery telo. Mandritra izany fotoana izany, mamela ny streaming amin'ny fitaovana roa miaraka amin'ny fonosana i Hulu.
Na izany aza, misy fanampiny fanampiny fitaovana tsy voafetra. Hahafahanao manao izany mampandeha Hulu amin'ny finday telo ary fitaovana tsy voafetra ao an-trano. Indray mandeha indray, manana an'i Hulu ianao ho mpandresy mazava tsara amin'ny alàlan'ny fahafaha-manaony amin'ny fonosana Add-on.
Hulu vs Sling TV - Endri-javatra lehibe
Ny teboka iray amin'ireto fampiharana streaming ireto dia ny mitondra anao afa-po mahafinaritra. Tena nanjary nahagaga tokoa ny nanapa-kevitra ny amin'ny fampiharana izay manolotra karazana atiny. Afaka mahita dokam-barotra sy dokam-barotra be loatra ianao. Na izany aza, toa manarona spektrum malalaka i Hulu sy Sling.
Andao atomboka amin'ny fandinihana ny tena zava-niainana TV mivantana. Hulu + Live TV dia fonosana famandrihana izay mitondra fantsom-pahitalavitra mivantana feno ho anao. Niara-niasa tamin'ny tambajotra lehibe maro toa ny NBC, CBS, ABC, Fox, ary tambajotram-pahitalavitra hafa izy io. Noho izany, manolotra filaharana mahasarika ho an'ny fantsom-pahitalavitra izy. Ankoatr'izay, manana fanampiny fanampiny ho an'ny Disney +, ESPN +, HBO, ary Starz ianao hanitarana lavitra kokoa ny atiny.
Ny Sling TV dia mitondra anao ny fantsom-pahitalavitra LIVE izay mety tsy misy ny fantsona malaza kokoa, fa maharitra kosa ny fanangonana. Izy io dia manana Cartoon Network, CNN, FOX, AMC, Comedy Central, ary haino aman-jery hafa izay nitombo laza raha oharina amin'ireo fantsona premium an'i Hulu.
Ka na i Hulu aza dia afaka mandresy amin'ity fihodinana ity miaraka amin'ny laharana maro maneritery, ny Sling TV dia mitondra anao fantsona fividianana fividianana mora vidy sy mahafinaritra kokoa. Manana safidy koa ianao hanampiana na hanalana ireo fantsona ary hisoratra anarana amin'izy ireo misimisy kokoa noho ny Hulu. Noho izany, i Sling dia mitazona mora foana amin'ny departemanta.
Mety ho teboka manamarika izany fa tsy manolotra fandaharam-potoana Live TV fahita amin'ny fahitalavitra satelita sy ireo fampiharana TV mivantana maro hafa i Hulu. Mandritra izany fotoana izany, mitondra fandaharam-potoana amin'ny fahitalavitra ho anao i Sling hanamarihana mora foana ilay programa ary hiomanana ho azy ireo mialoha.
Na izany aza, amin'ny adin'i Channels, mety handresy i Hulu. Raha tsy mandinika ny vidin'ny fisoratana anarana ianao. Hulu + Live TV dia famandrihana tokana izay mitondra anao ny safidin'ny Live TV. Tena lafo kokoa noho ny famandrihana Sling TV io.
Ankoatr'izay, mbola hanana dokambarotra sy dokam-barotra izay tsy ao amin'ny Sling TV ianao. Ka raha tsy mandinika ny kalitaon'ny lineup ianao amin'ny vidiny dia mandresy mora foana ity Sling TV ity.
Horonantsary momba ny fangatahana
Samy Hulu sy Sling TV dia mitondra anao DVR miorina amin'ny rahona hanoratra ny tianao indrindra Seho amin'ny fahitalavitra SY sarimihetsika hijerena azy ireo. Ankoatr'izay, ny Sling TV sy i Hulu dia mitondra horonan-tsary fangatahana ho anao. Na izany aza, ny fahafahan'ny Hulu sy ny filaharana dia mahavariana kokoa noho ny Sling TV.
Indrindra satria ny SlingTV dia mifantoka indrindra amin'ny fanomezana anao traikefa amin'ny fahitalavitra mivantana. Mandritra izany fotoana izany, i Hulu dia miasa ho toy ny fampiharana streaming an-tserasera feno miaraka amin'ny atiny feno fangatahana. Amin'ity spectrum ity dia handresy amin'ny fotoana rehetra i Hulu.
Ity famerenana ity dia nifototra tamin'ny kalitaon'ny atiny, filaharana, fialamboly ary fanamorana fampiasana. Tsy nihevitra ny vidin'ny famandrihana na fiasa hafa mitovy amin'izany. Misy ny fanovozan-kevitra, fa ny fanapahan-kevitra dia nifototra tamin'ny antony fialamboly ankapobeny. Noho izany, handresy amin'ny TV Sling i Hulu.
Na izany aza, raha afaka mandinika ny fahafaha-misafidy ny fisafidianana fantsona sy ny famandrihana ‘takatry’ kokoa izany, ny Sling TV dia afaka mihazona ny fototr'izany. Raha mandinika ny zava-niainana mivantana tamin'ny TV ianao, dia azo antoka fa manolotra amin'ny endriny ity Sling TV ity. Na izany aza, Hulu dia nahavita nanana fanangonana tambajotra sy fantsom-pahitalavitra feno kokoa.
Mikasika ny interface sy ny fampiasana azy mora dia mbola lavitra ny lalan'ny Sling TV. Mazava ho azy, nahavita nihazona ny fampiakarana fitsarana ambony i Hulu. Mandritra izany fotoana izany, mahatsapa ho mahitsy, minimalista ary mora vidy mihitsy aza ny Sling TV, toy ny fampiharana streaming maimaimpoana hafa eny an-tsena.
Raha atao amin'ny teny tsotra. Raha tsy miraharaha ny vidiny ianao ary maniry fialamboly avo lenta, dia Hulu no lalana ho anao. Hulu dia manolotra karazana tolotra, bonus, fihenam-bidy ary maro hafa.
Na izany aza, ho an'ny safidy mifidy teti-bola kokoa miaraka amin'ny tsipika fantsom-pahalalana mendrika ary na dia serivisy ‘maimaim-poana’ aza dia ho tsara kokoa ny Sling TV, indrindra raha ampiarahinao amin'ireo fampiharana streaming hafa io.
Fampitahana hafa mety tianao:
Sweet Home Season 2: Misy datin'ny famoahana sy tsaho ve?
Overwatch 2 - Izay rehetra fantatsika hatreto
tranonkala handrenesana mozika maimaim-poana any am-pianarana
solonanarana sy teny miafina ho an'ny netflix
amazon prime mpianatra vs prime
sarimihetsika an-tserasera maimaim-poana amin'ny sarimihetsika feno
tranonkala mozika tsy sakanan'ny solosaina an-tsekoly
inona no lalao tsara indrindra amin'ny roblox